YEYINTNGE(CANADA): Sunday, March 15
အောင်တံခွန်သင်္ဘောက ၁၃ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၈ နာရီခန့်မှာ
ကမ်းခြေစောင့်ရေတပ်က ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီမှ ရောက်လာတယ်။ ကြားမှာအချိန် ၁၁ နာရီလောက် ကွာတယ်။
အမှန်တကယ် အဆက်သွယ်မရလို့ ၁၁နာရီတောင် ကြာခဲ့တာလား?
အဆက်သွယ်ရရဲ့သားနဲ့ တမင်တကာ ကြာအောင် နေခဲ့တာလား?
သင်္ဘောပေါ်မှာ လိုက်ပါသွားတဲ့ လူ ၂၀၀ လောက်ကြီးမှာ တစ်ယောက်မှတောင် ဖုန်းမပါလာလို့ မဆက်သွယ်နိုင်တာလား?
သင်္ဘောမှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ရေဝင်မူများလာလို့ လိုက်ပါလာတဲ့
ခရီးသည်တွေက မလှမ်းမကမ်းမှာ မြင်နေရတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို ထိုးကပ်လိုက်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်္ဘောတာဝန်ရှိသူတွေဟာ ခရီးသည်တွေရဲ့ စကားကို နားမထောင်ပဲ
သင်္ဘောမောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး အသက်ကယ်အင်္ကျီဝတ်ပြီး
သဘောင်္ပေါ်က ခုန်ဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ ခရီးသည်တွေကို ထားသွားခဲ့ကြတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/15/20150အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသား သစ္စာဖောက် လောက်ကောင်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုခေါ်သနည်း
တလောလေးက FB လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ "ရိုဟင်ဂျာ" ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးကိုနီရေးတယ်၊ မရေးဘူး၊ ထုတ်ဝေတယ်၊ မထုတ်ဝေဘူး၊
ဦးကိုနီဟာ ကုလားအရေးကို ဦးစားပေးတယ်၊ မပေးဘူး ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မျိုးချစ်ညီအကိုတွေအကြား ဝေဖန်သံတွေ အတော်လေး ဆူညံပွက်လောရိုက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ ဦးကိုနီဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလည်းဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိလာပါတယ်။ ဦးကိုနီဟာ ဖခင်စူတန် နှင့် မိခင်ဒေါ်လှတို့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် ကသာမြို့နယ် အင်းရွာ ကျေးရွားမှာ မွေးဖွားပြီး ကသာမြို့ အ.ထ.က (၁) ကျောင်းမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး
ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ တက္ကသိုလ် B.A Law ဘွဲ့ကို၎င်း L.L.B ဥပဒေဘွဲ့ကို၎င်း ၁၉၇၅-၇၆ ပညာသင်နှစ်များမှာတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေအသင်းကြီး၏ ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
တဖန် ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ နည်းပြဆရာအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။
နောက် ဆရာကြီး ဦးကိုယု၏ ရှေ့နေချိန်ဘာမှာ အလုပ်သင်ရှေ့နေအဖြစ်၎င်း အမှုလိုက်ရှေ့နေအဖြစ်၎င်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ် မှစပြီး LAUREL LAW FIRM ကိုတရားဝင်တည်ထောင်ပြီး ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
နောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ CAPACITY BUILDING TRAINING မှာ TRAINER အဖြစ်၎င်း ၂၀၀၈ ခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၎င်း စသည်ဖြင့် ရိုးရှင်းစွားဖြတ်သန်းနေထိုင်လာခဲ့တာတွေ့ ရပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ ကျနော်ဟာ ဦးကိုနီကို လော်ဘီလုပ်ပေးနေတယ်လို့ မမြင်စေချင်ပါဘူး။ တချို့လူတွေပြောတဲ့ ဦးကိုနီဟာ အန္တရယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ သူ့အကြောင်း ကျနော်စုံစမ်းသိရှိရသလောက် ဒါအကုန်ပဲဆိုတာကို ဖော်ပြချင်တာပါ။
တကယ်တော့ဗျာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာပဲဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီ တိုင်းပြည်အာဏာကို အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
စသည်ဖြင့် ၃ မျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ မိမိတိုင်းပြည် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အာဏာသုံးရပ်မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေဟာ သစ္စာရှိတဲ့ မိမိနိုင်ငံသား စစ်စစ်ဖြစ်နေဖို့က ပထမ (၁) အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ဗျာ ယုတ်စွအဆုံး ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်က အန္ဒရာယ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေတဲ့ ဦးကိုနီဟာ ဒီဥပဒေ (၃) ရပ်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုမှ ရှိမနေသေးဘူးဆိုတာလည်း ခင်ဗျားတို့ကို သိစေချင်တယ်။
အဲ့တော့ ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်အာဏာ (၃) ရပ်ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဥပဒေပြုရေးအာဏာကို ပိုင်စိုးထားတဲ့ လွှတ်တော်မှာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ နေရာယူထားသလဲ ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။
ကျနော်တို့တွေဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေး (NATIONAL SECURITY) ကို အလေး ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပါးစပ်ကသာအော်နေတယ် တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာကို ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ဘင်္ဂလီ (၃) ဦး ရောက်နေတာကျ သတိမထားမိလိုက်ဘူး ဆိုတာမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ဒီ ဘင်္ဂလီ အမတ် (၃) ဦကတော့..
ဘယ်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမဲနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေသလဲ...??? အသက်(၁၈)နှစ်အထက် နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဘင်္ဂလီ ကျား (၂၂၆၁၂၇) ဦး၊ မ (၂၄၆၈၈၆)ဦး၊ ပေါင်း (၄၇၃၀၁၃)ဦး ရဲ့ထောက်ခံမဲနဲ့ လွှတ်တော်ထဲရောက်နေတာဖြစ်တယ်။
ဒါတောင် အသက် (၁၀) နှစ်ကနေ(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးသူတွေရဲ့ စာရင်းမပါသေးဘူး။
အသက်(၁၀)နှစ်နှင့် (၁၈)နှစ်ကြား ထက်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျား (၉၈၇၉၄)ဦး၊
အားလုံးစုစုပေါင်း White Card ကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ
(၆၇၀၉၀၁) ဦး ရှိပါတယ်။
ဒါ(ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ စာရင်းဇယားအရ) ပါ။
အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ဘာ့ကြောင့်အလုံးအရင်းနဲ့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောဒေသတွေကို ဝင်လာနိုင်ကြသလဲ...???
ဖွတ်အစိုးရရဲ့ လျင်သူစားစတမ်းစနစ်နဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ခိုးသွင်းတာတစ်မျိုး ပေါ်တင်သွင်းတာတဖုံ...
၎င်းတို့ရဲ့ လက်စွမ်းပြမှုကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်က လက်မခံသည့် ဘင်္ဂလီတွေဟာ ဖွတ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကို လာဘ်ပေးပြီး ပျော်ပျော်ကြီး စံမြန်းလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အတွက်တော့ ဖွတ်အစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေဆိုရင်လည်း မမှားပေဘူးပေါ့ဗျာ။
စင်စစ် ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ နိုင်ငံသားမဟုတ်လျှင် မဲပေးခွင့် အခွင့်အရေးမရှိ၊ သို့သော် မိမိတိုင်းပြည်က ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်တွေရဲ့ မဲ နိုင်ချင်ဇောနဲ့ ထွင်လိုက်တာ ဝှိုက်ကဒ်သောဘာသောမရှိ အကုန်မဲပေးခွင့်ရှိ၏ဆိုပြီး လုပ်ထည့်လိုက်တာ အခုတော့ ဘင်္ဂလီ (၃) ဦးဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆန့်ဆန့်ကြီးနဲ့ ခန့်ခန့်ကြီး။
ဒီ ၃ ဦးဟာ လွှတ်တော်ထဲ စရောက်ကတည်းက ဒီ ဘင်္ဂလီ သမိုင်းလိမ် လူမျိုးတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးအတွက်ပဲ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်နေတာ တွေ့ရတယ် ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘာမှထိထိရောက်ရောက် အဆိုတင်သွင်းတာတို့ဘာတို့ သိပ်မတွေ့ရဘူး။
မှတ်မှတ်ရရ ဖွတ်ပါတီဝင် မောင်တောကိုယ်စားလှယ် ဘင်္ဂလီအမတ် အောင်ဇော်ဝင်းဟာ ၂၀၁၂ ဧပြီ (၂၉) တွင် "ဘင်္ဂံလီများအား နိုင်ငံသားဖြစ်အောင် တစိုက်တမတ်မတ်
လုပ်ဆောင်သွားမည်၊ သူ့အနေဖြင့် များမကြာမီ မူဆလင်များအား
နိုင်ငံသားကပ် တရားဝင် ပေးရန် စစ်အုပ်စုမှသူ့အား
DAINIK COX’S BAZAR
တစ်ဖန် နယ်စပ်ဒေသရှိ ဘင်္ဂံလီမျာအား မြန်မာများမှလူမျိုတုံးသတ်ဖြတ်မှု
(Hidden Genocide) ပြုလုပ်ကြောင်းကို
အယ်လ်ဂျားဇီးယားတွင် ဘူးသီးတောင်ကိုယ်စားလှယ် ဘင်္ဂံလီဖွတ်အမတ်ရွေမောင်ကလည်း
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော စစ်ဗိုလ်များကား
ထိုသူတို့ရာဇ၀င်မှာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ နယ်စပ်ဒေသများမှ လာရောက်အခြေချပြီး အာဏာပိုင်များနှင့် ပဏာသင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် များ ရနေကြသူများပင်ဖြစ်နေပြန်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ရှုပ်တွေးပွေလီနေသော သမိုင်းလိမ် ဘင်္ဂလီ အမတ်တွေနှင့် White Card ကိုင်ဆောင်ထားသော သမိုင်းလိမ် ဘင်္ဂလီ (၇)သိန်း နီးပါးရဲ့ အရှေ့မှာ သိသိသာသာကြီး မားမားမတ်မတ် ရပ်ပေးနေသူကတော့ ယနေ့ လွှတ်တော် လောကမှာ မကောင်းသတင်းနှင့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖွတ်အမတ် ဘူးလက်လှဆွေပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဘူးလက်လှဆွေ မည်ကဲ့သို့ ရပ်တည်ပေးခဲ့သနည်း....??
NLD လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးကာစတွင် NLD က ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးရဲ့
"အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လူမျိုးခြားများ နိုင်ငံတွင်း ၀င်ရောက်နေခြင်း၊
မသမာသောနည်းဖြင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်များ ကိုင်ဆောင်ခြင်းကို
စီမံချက်ချမှတ် အရေးယူရန်" ဆိုတဲ့ အဆိုတစ်ခုတင်လိုက်ပါသည်။
ဖွတ်ပါတီ နှင့် တစ်မတ်သားများကို
''အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက လူမျိုးခြားများ စိမ့်ဝင်ရောက်ရှိနေခြင်း၊
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများကို မသမာသော နည်းလမ်းများဖြင့်
ရယူ ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ..လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံနှစ်ခုကြားမှာ ရှိပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာဆိုရင် လူဦးရေ သန်း ၂၀၀ နီးပါးရှိပြီး
လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ နိုင်ငံနဲ့လည်း
နယ်နိမိတ်ချင်း မိုင်ပေါင်းရာချီ ထိစပ်နေတဲ့ နိုင်ငံနဲ့လည်း ထိစပ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးခြားတွေ
အနောက်ဘက်မှာလည်း သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အကျယ်အ၀န်းနဲ့ မမျှတဲ့အတွက်
လူမျိုးခြားတွေ စိမ့်ဝင်လာနေတာကို စိုးရိမ်ဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံသား ဥပဒေတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတာတွေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေတွေနဲ့
မညီညွတ်တာတွေအပြင် သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေဟာ နိုင်ငံသား
စီစစ်ရေးကဒ် ကိုင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အကျင့်ပျက်၊ ခြစားကာ တိုင်းပြည်ရဲ့ မျက်နှာမထောက်တဲ့
အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကို တွေ့နေ ရပါတယ်။
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်မှာ အချက် အလက်တွေ အကုန်မထည့်ဘဲ
ရခိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့
တရားမ၀င် စိမ့်ဝင်လာတာတွေ၊ စီစစ်ရေးကဒ် ကိုင်ထားတာတွေ၊ လူမျိုးခြားတွေကို အရေးယူပေးဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ'"
ထိုသို့ ရဲရဲတောက်တင်ပြခဲ့သော..NLD ပါတီရဲ့အဆိုအား
NLD ပါတီနှင့် ရခိုင်ပါတီမှလွဲပြီး အခြား
ထိုအဆိုကိုပုဒ်မ ၁၄၄ ရုတ်သိမ်းပြီးမှဆွေးနွေးသင့်တယ်...လို့..
ထို့ကြောင့် NLD ပါတီရဲ့...
လှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့ အဆိုပါ
နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ
နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူဝင်လူထွက် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ
ဘယ်သူတွေထ ကန့်ကွက်တာလဲ ဆိုတော့..
ဖွတ်ပါတီမှ ဦးလှဆွေပါ.. နောက်ဆုံးတစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ်..
နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင်
ပါရှိသော "နိုင်ငံ သား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ်
ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ထား သူ ဖြစ်ခြင်း" ဆိုသည့်
စကားရပ် အစား "နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း"နိုင်ငံ သား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊
နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်
ကိုင်ဆောင် ထား သူ ဖြစ်ခြင်း"
ဆိုသည့် စကားရပ် အစား "နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း" ဟု
ပြင်ဆင် သင့်ကြောင်း အဆိုဖြစ်ပါတယ်။။
ဒီလောက်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ အဓိက သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်ဟာ NLD လား ကြံ့ဖွတ်လား?? ဦးကိုနီလား
ဒေါ်စုလား ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလားဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ယမန်နေ့က ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ငြိမ်း ချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုနေသော ကျောင်းသား/သူများနှင့် ပြည်သူ လူထုတို့ကို ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုအား ကန့်ကွက်ရှုံ့ချခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော ကျောင်းသားများ အမြန်ပြန်လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုချက်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အနက်ရောင်လှုပ်ရှားမှု (Black Campaign) အဖြစ် တစ်လက်မ အရွယ်အစားခန့် အနက်ရောင်ပိတ်စ ရင်ဘတ်တွင် ဝတ်ဆင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ (အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါကြောင်းနှင့် ဖမ်း ဆီးထိန်းသိမ်းခံ ကျောင်းသား/သူများ အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်အား ဆန္ဒသဘောထား တူညီသူမည်သူမဆို အောက်ပါစာ ရွက်ပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး info@ffssyangon.org သို့ ပြန်လည်ပေး ပို့နိုင်ပါသည်။)